Sirdoonka Ganacsiga, GIS ee ganacsiga - Geofumadas
Janaayo, 2009 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, tabo cusub, GIS kala cayncayn ah
Waxaan ku arkay sanad ka hor, aniga iyo qaar ka mid ah asxaabta geofumed inta aan nidaam u samaynayo koox bangiyo caalami ah. Gaar ahaan, waxay ku saabsan tahay juquraafinta dadka haysta kaarka amaahda, taasi waxay ahayd odyssey iyadoo la tixgelinayo in cinwaanada lagu qoray ku dhowaad farshaxanka dhagaxa ah.
Laakiin natiijada kama dambaysta ah waxay ahayd habab fudud oo loo sameeyay saraakiisha bangiga, oo ay ku weydiin karaan su'aalo sida:
Khariidadda xaafadaha loogu talagalay ciqaabta sare
Meelo suurtogal ah in lagu rakibo hay'adaha adeegga
Waddooyinka qaybinta waraaqaha xisaabta
Meelaha jiidashada leh ee loogu talagalay horumarinta alaabta cusub
Tani waa waxa loogu yeero "Sirdoonka Ganacsiga", oo aan ka ahayn nidaamyo lagu falanqeeyo doorsoomayaasha qaarkood duulimaadka oo lagu muujiyo khariidado rinji ah. Sayniska kuma jiro GIS laakiin waa falanqaynta horseedaysa abuuritaanka astaamaha habsami u socodka, marka waa ku habboon tahay in la ogaado ganacsiga, waqtiyada, alaabooyinka la bixiyo, macaamiisha iyo xaaladaha maxalliga ah.
Waan xasuustaa qaabdhismeedka kala-go'an oo ay sameeyeen saaxiibadayda aan sigaar cabbin, waxay ahaayeen shaashado heerar kala duwan:
Maareeyaha suuqgeynta: Guddi si aad u maamusho shuruudaha cabbiraadda, sida boqolkiiba heerka la aqbali karo, shuruudaha xulashada macaamiisha, bartilmaameedyada, qeybinta iyo xuduudaha dejinta ...
Farsamada GIS, interface oo leh GUI kala cayncayn ah Waxay ahayd mid dhaqaale badan, in farsameyaashu ay keli keli ah macaamiil cusub oo cusub, abuuray aag cusub, iwm.
Maamulayaasha, isku xirka oo ay arki karaan isbeddellada, isbarbardhigaan iibka ka dhanka ah himilooyinka, samee qorshe shaqo iyo helitaanka digniinta guulaha ama dib-u-dhaca.
Badanaa waxaa loo yaqaan 'Sirdoonka Ganacsiga' si loogu isticmaalo macluumaadka loogu talagalay go'aan qaadashada maamulka. Sida ay noqon laheyd:
Maxay dembiyada intooda badani uga imanayaan meeshan?
Xaggee ayuu yahay meeshii saxda ahayd ee xaruntii wax iibsiga ee xiga?
Maxay yihiin qodobbada ku haboon ee anteenooyinka gacanta?
Intee ayaa le'eg noqon laheyd qiimaha ay ku bixineyso deriska horumarintaan?
Xaggeen xajmigeenu ka imanayaa?
Sababtoo ah gumaysigan aan leenahay macaamiisha aad u xun?
Waxa kakan ee arrintan ku saabsan waa in ay tahay in barnaamij laga sameeyo, waana qaali. Lama filayo in falanqayn kasta farsamayaqaanada GIS ay samayn doonaan khariidadaha rinjiyeysan iyo maareeyaha suuqgeynta ee dib u eegi doona shuruudaha la adeegsaday. Tan awgeed, jadwalka ayaa la adeegsadaa oo soo celiya natiijooyinka, iyo halka xuduudaha loo habeyn karo.
Anigaa ku qanacsanahay tiknoolajiyada tiknoolajiyada, waxaan xasuustaa inay ku guuleysteen in ay ku sameeyaan IMS si ay u abuuraan qodobo cusub oo ka socda codsiyada webka, samaynta qoraallada ku jira diiwaanka Oracle, khiyaamaynta Manifold oo ku soo jiidanaya duullimaadka.
Waan ognahay in ESRI ay leedahay arji ujeeddooyinkan la yiraahdo Falanqaynta Ganacsiga, laakiin kiiskan waxaan rabaa in aan ka hadlo codsi iga tagay oo aan ku riyooday codsi aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo boostada; waxaa loo yaqaan 'Map Intelligence', oo ay soo saartay Integeo, shirkad asalkeedu yahay Australiya laakiin adeegyo meelo kala duwan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Spain.
Waa maxay Integeo cajiib ah
Plugin si ay u dhexgalaan MI to Excell !!!
Isticmaalidda Excel adeegsiga caansan, kuwani waxay abuureen plugin u oggolaanaya in ay ku xidhmaan xogta ama lagu kaydiyo Excel ama saldhig dibadeed, iyo inay la ciyaaraan interface oo muujinaya natiijooyinka garaafka sida ku xusan macluumaadka jira.
Waad ku ciyaari kartaa lakabaynta lakabka, weyneeyn kartaa, weyneyn kartaa, dami kartaa ama xiri kartaa. Xogta waxaa lagu soo bandhigi karaa daabacaadda ArcIMS ama waxaa looga adeegsan karaa codsi kale oo leh heerarka OGC sida Manifold, ArcGIS Server, Geoserver ...
Isku-dubarid codsiyada Geospatial iyo Reporting.
Map Intelligence ayaa isku xirnaanta la codsiyada geospatial sida ESRI, MapInfo, Geoserver oo ku xidhiidhsan wararka MicroStrategy iyo codsiyada, Oracle / Hyperion, IBM / Cognos, SAS, SAP, walxaha Business, Actuate ama ahbaa ka madoobaad.
Sida laga soo xigtay wargeyska ugu danbeeya, Sun ayaa soo iibsaday alaabtan si loogu xiro Hyperion si ESRI, taas oo codsi ku socota Java, sidaas darteed Mac iyo Linux.
Ugu dambeyntii waxay u muuqataa in tani tahay codsi aad u cajiib ah, gaar ahaan sababtoo ah inkasta oo ay ujeedo u tahay badeecada kama dambaysta ah ee GIS, waxay u qabataa adeegyo khaas ah oo xogta oo keenaysa natiijooyin iyada oo aan loo baahnayn in lagu yeesho kharash horumarin sare ah.
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah ogaato, tag Integeo ama Intego Iberia.
Post Previous" Hore Qaar ka mid ah fiilooyinka waxtar leh ee Qoraha Tooska ah
Post Next Geofumadas, sanadka cusub, waji cusubNext »
2 Jawaab ah "Sirdoonka Ganacsiga, GIS ee ganacsiga"
Mario Doñè Montalvo isagu wuxuu leeyahay:
Marwalba waxaan rabaa inaan ku xiro geofumadas